Topnepalnews.com | प्रधानमन्त्री ओली जंगबहादुर बन्न खोजे : काँग्रेस नेता केसी
प्रधानमन्त्री ओली जंगबहादुर बन्न खोजे : काँग्रेस नेता केसी
Posted on: November 17, 2018 | views: 1222
१ मंसिर, काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जंगबहादुर, स्टालिन र हिटलर बन्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख रहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले काम भन्दा बढि कुरा गर्नुभयो । उहाँ आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न उद्धत हुनुहुन्छ । उहाँमा सत्ता र शक्तिको उन्माद देखियो । प्रधानमन्त्रीमा समग्र रुपमा जंगबहादुर बन्ने आकांक्षा तिव्र रुपमा विकसित भएको छ। ’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले २५ अर्बभन्दा माथिका परियोजनाहरु आफू मातहात केन्द्रित गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । केसीले भने,‘यो ९ महिनामा सरकारले के चाहीँ राम्रो काम गर्यो त? वृद्धभत्ताको कुरा उठाउँदा–उठाउँदै म त थाकिसकें । सत्तामा आउनुभन्दा पहिले ओली र प्रचण्डजीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जेल हाल्छौं, कारबाही गर्छौं भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभयो । तर, सत्तामा आएपछि अहिलेसम्म केही भएको छ त ? बरु बुढीगण्डकी परियोजना बिना प्रतिष्पर्धा दिईयो ? वाईडबडीको विवाद त्यस्तै छ । साँढे ३३ केजी सुन कहाँ छ ? यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई किन गुपचुप राखिएको छ ? राख्नुपर्ने कारण के हो ?’
उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको शुक्रबार ११२ दिन भैसक्दापनि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए । उनले भने,‘निर्मलाका बुवाआमा अनशन बस्नुभएको छ । उहाँहरु विरामी पर्नुभएको छ । तर, सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन् ।’ निलम्बित एसपीले आफूले त आईजीपीको निर्देशन मानेको हुँ भनेर एक अनलाईनमा बोलेको कुरा सुनाउँदै केसीले सरकारको लागि अपराधी किन ठूलो भएको हो ? भनेर प्रश्न गरे ।